About Us - Gaomi Ruigu Labor Protection Co., Ltd
Dayrta iyo jiilaalka
kabo sare-jaray difaaca
kabaha Hoose-jaray difaaca
Guga iyo xagaaga
Shandong Gaomi Ruigu warshad qalabka badbaadada shaqaalaha waa ganacsi oo si fiican u yaqaan ku takhasusay ay-soo-saarka iyo iibinta kabaha ilaalinta shaqada iyo gacmo gashi, Warshadda ayaa mar walba raacay fikradda maamulka cusub oo tayo leh oo ku salaysan iyo ammaanka. Waxaa la soo koraya oo sii kordhaya ee tartanka suuqa kululayd, oo uu ku guuleystay comments wanaagsan iyo mahad iibinaya iyo macaamiil badan.
Our warshad inta badan soo saari brand Ruigu qalabka badbaadada shaqaalaha. products waa complete, iyo wax soo saarka ugu weyn waa thread top, duray, taxane dheg qabow, guud ee in ka badan 60 kala duwan, tayo wanaagsan leh, qaab ka xoogbadan. The alaabta of our warshad, ku xiran tahay warshadaha iyo nooca shaqada, u isticmaalaan qalabka iyo hababka kala duwan si loo daboolo baahiyaha dhammaan noocyada kala duwan ee xaalado shaqo oo xun.
Chen Jianhua, maamulaha guud, soo dhoweeyay macaamiisha cusub iyo wax duug muunad processing iyo ahaanayta mass of Hababka kala duwan, diyaar u ah inay la soo saarka oo tayo sare leh iyo adeegga tayada xoogbadan shaqeeyaan, diyaar u ah inay kula dhammaan qaybaha nolosha ku dadaalaan si ay u abuuraan cusub Waxaan nahay iyo tayo sare iyo jawi nabdoon.
Hou Zhang Lu ee Horumarinta Zone Chaoyang, Gaomi City, Gobolka Shandong, Shiinaha